Oo hadda leedahay website u gaar ah: bibelonline.se
Waan akhriyey KJV iyo tixgelinaysaa in ay shaki la'aan waa tarjumaadda fiican Swedish Kitaabka Quduuska ah!
KJV - SRB NT buugaagta GT hadda leedahay website u gaar ah, bibelonline.se . Halkan waxa aad ka raadin kartaa qoraalka Kitaabka Quduuska ah, nuqulka qoraalka aad rabto in aad iyo aad u badan.
text aasaasiga ah ee KJV la taageeray by qoraal gacmeedyada hore
sidoo kale booqo:
Waan akhriyey KJV iyo tixgelinaysaa in ay shaki la'aan waa tarjumaadda fiican Swedish Kitaabka Quduuska ah !
Waxaan aad ugu boorinayna in qof walba in uu akhriyo KJV ah. Waxaa jira turjumaad Bible ah in aad ku kalsoon karo oo ah kan rumaysadka Ilaah Ereygiisa!
KJV waxa qoray bogga internetka ee uu bibel.se:
Rabbigu wuxuu dhawray uu Word
turjumaadaha Newer sida Bible 2000 iyo Dadka Swedish ee Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku salaysan yahay qoraalka aasaasiga ah oo cusub oo yimid 1970. The cusub duwan text aasaasiga ah ee qoraalka hore aasaasiga ah ee ku saabsan 3300 meelo Axdiga Cusub dhexdiisa.
Waxaan la siiyo dooda Swedish KJV in aan ku eekaan qoraalka jir aasaasiga ah by Nasaarada loo isticmaalo oo dhan xilligii Christian. Waxaan aaminsan nahay in Rabbigu ayaa eraygiisii.
Caalamka sidoo kale difaaci Text Ingiriiska Bible Society saddexmidnimada Bible Society, Helay, taas oo ku siinayaa baxay King James Version ee England. In Maraykanka, ka mid ah ururada kale ee American Way of Life iyo Dean Burgon Society The.
KJV Swedish ayaa daba socda qoraal hore aasaasiga ah
Tan iyo weynba Swedish toobadda Bible, Charles ee Church Bible, aad si daacad ah soo raacay Text ka helay, waxaan go'aansannay in aan this jir ah Kitaabka Quduuska ah iyo rabitaanka dib iyadoo la kaashanayo Rabbiga loo hubiyo in ay ku nool yihiin doonaa in dhar ah luqadda casriga ah. On the jeer yar marka duwan Church Bible Charles ayaa ka Text ka helay sida aynu iyadoo la kaashanayo khubaro aqoon Giriigga ayaa waxay leeyihiin si toos ah loo tarjumay Text ka helay. Tani waxay ka dhigan tahay in KJV waa a text turjumaad aamin aasaasiga ah ee qoraalka ku Helay iyo jeer in aad dooran kartaa fursadaha fasiraad kala duwan, waxaan leenahay, sida caadiga ah u doortay fasiraadda helay Charles ee Church Bible. KJV New Testament sidaas waa turjumaad casriga ah ee Text heshay Giriigga ah ee asalka ah, halka sidoo kale waa dib u eegis ah ee Charles ee Church Bible. Intaa waxaa dheer, turjumaad English ah King James Version saameyn balaaran weyn on shaqada ee Axdiga Cusub. Qof kasta oo raba in la helo wax u dhigma ah Swedish ee King James Version waa in sidoo kale dooran KJV, sida turjumaadaha kuwaas oo si daacad ah soo socota qoraaladii asalka ahaa ee Giriigga.
Ka hor inta apg29 ku lahaa Axdiga Cusub ee KJV ah, laakiin maxaa yeelay waxa ay hadda leedahay website u gaar ah, inaan halkaasna wax kuu gudbin!
V 09, måndag 1 mars 2021 kl 17:36